adeegyada – 360 OpenPlotter
Dayuurada sare, Ever sare
Si wadajir ah ula drones si sharciya uga diiwaangashan waxaan ka dhigi kara views cajiib ah mashruuca idinkaa, Haddii ay dhacdo ama la rakibo. No arrinta waxaa arooska idinkaa, doon ama dhismaha, xataa Bbc anteenada.
sawir Our dhigi photos ugu yaraan 4 kiiloo mitir xalinta iyo in buuxa immersive 360. Waxay yihiin oo dhan ku guuleystay ay ka shaqeeyaan filim caalamiga ah iyo tartanka sawir. our 360 Sawir yihiin Google ku kalsoon tahay oo aad leedahay xuquuq gaar ah iyo helitaanka meelo qarsoon oo magaalooyinka guriga ay doorteen. Under xaaladaha caadiga ah sawirada Uploads qaadan jagooyinka ugu horeysay ee Google. Sawir kasta wuxuu leeyahay in ka badan hal milyan oo views. ganacsi idinkaa iska qaadan kartaa meesha ugu horeysa ee Khariidadaha Google darajada la hababka noo xaqiijiyay iyo sawirka.
Sharuucda ee Xuquuqda Flight & waraaqaha
iyadoo dawladaha iyo maamulada deegaanka oo burburin kara oo dhan qorshaha soo saarka idinkaa. Gaarka ah haddii aan ka hadlo duulimaadyada iyo sawiro anteenada. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. Waxaan ku salaysan maxalliga ah ka shaqeeya. warqad Tani waxay u ogolaaneysaa a qaadan off sida diyaarad iyo caga a sida diyaarad. Mid kasta oo ka qaadi waxaa si rasmi ah diiwaan gashan oo helay ogolaansho. warqad Tani ma ogola in la sameeyo filim ama sawiro. Waayo, kan jira sharciyo kala duwan iyo waaxaha dawladda.
ayaa weli ma iswaafajiyaa. Ciqaabta aad ku kici kara 20000 Euros ilaa xabsi. Waxaan abaabuli idinku sugan Europe ee flightrights iyo waraaqaha sharciga. Waxa kale oo suurtogal in adiga iyo wadaha idinkaa iska dhigay on our liiska, in aad u soo duuli kartaa drone sharci. model Tani waxaa inta badan loo isticmaalaa soosaarid TV xaaladaha degdegga ah ama ay dalxiisayaal in jeceshahay in ay soo saaraan sawirada sharci u gaar ah. hore ee frontto na weydii ka wadahadlay qaabka ugu fiican ee aad.